Madaxweyne Farmaaajo oo xil ka qaadis ku sameeyay taliyihii ciidanka illaalada madaxtooyada – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Farmaaajo oo xil ka qaadis ku sameeyay taliyihii ciidanka illaalada madaxtooyada
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa xil ka qaadis ku sameeyay taliyihii ciidanka illaalada xarunta madaxtooyada Soomaaliya Jeneraal Ibraahim Sheekh Muxiyadiin, isagoona xilkaasi u magacaabay Korneel Axmed Maxamed Afcadey.
Jeneraal Ibraahim Sheekh Muxiyadiin ayaa ah nin si aad ugu dhawaa madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana haatan lagu badelay Korneel Axmed Maxamed Afcadey.
Sidoo kale, Korneel Axmed Maxamed Afcadey ayaa isna horey xilkaasi usoo qabtay xilligii uu dalka madaxweynaha ka ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Tan iyo markii uu madaxweyne Farmaajo la wareegay taladda dalka, waxa uu inta badan isbadel ku sameeyay agaasimayaashii iyo xubnihii kale ee ka howlgalaayay xarunta madaxtooyadda Soomaaliya, wuxuuna xilalkaasi u magacaabay shaqsiyaad ay isaga si aad ah isugu dhaw yihiin.
Si kastaba ha ahaatee, xil ka qaadistaan uu madaxweyne Farmaajo ku sameeyay taliyihii hore ee ciidanka illaalada xarunta madaxtooyadda Soomaaliya Jeneraal Ibraahim Sheekh Muxiyadiin ayaa u muuqata mid uu ku doonayo inuu ku yareeyo shaqsiyaadkii lasoo shaqeeyay madaxweynihii isaga ka horeeyay ee Xasan Sheekh Maxamuud.